Dhoollo tuska habka dimuquraaddiyadeed ee ugu wayn caalamka oo Hindiya ka dhacaya | Biyoguurenews.com
Home Wararka Dhoollo tuska habka dimuquraaddiyadeed ee ugu wayn caalamka oo Hindiya ka dhacaya
Doorashada ayaa qaadan doonta toddobo wareeg, waxayna socon doontaa toddobaadyo, natiijada ayaana lagu dhawaaqi doonaa 23-ka bisha May.
Doorashada Hindiya ayaa ah habka dimuquraaddiyadeed ee dunida ugu wayn, dad tiro ahaan ku dhow 900, 000,000 oo qof ayaa isu diiwaangaliyey in ay doorashadaan codkooda ka dhiibtaan.
Waxyaabaha la yaabka leh ee bulshada caalamka aadka usoo jiitay ee ku saabsan doorashada dalka Hindiya ayaa waxaa kamid ah, tirada dadka isu diiwaan galiyey codbixinta, tirada xarumaha codbixinta, tirada dadka ka shaqaynaya xarumahaas, tirada kuraasta lagu tartamayo iyo sidoo kale tirada xisbiyada ku loollamaya doorashada.
Baaxadda wayn ee dalka Hindiya aawadeed qabsoomidda doorashooyinka ayaa u baahan hawlgal aad u wayn, ayadoo loo yagleelay hal malyan oo xarumood oo dadka dalkaasi ay codkooda ka dhiiban doonaan.
Dhanka kale waxaa xarumahaas ka shaqayn doona 10 milyan oo qof, ayadoo lagu tartami doono 543 kursi oo ah aqalka hoose ee baarlamaanka.
Raysul wasaare Narendra Modi iyo xisbigiisa ayaa doonaya in dib loo doorto, ayagoo guulo waawayn kasoo hoyiyey doorashooyinkii dhacay sanadkii 2014-kii.
Xisbiga mucaaradka ah ee Hindiya ugu wayn ayaa ah kan uu hoggaamiyo Rahul Gandhi ee Congress Party, hase ahaatee xisbiyo kale oo ka jira gobollada dalka Hindiya ayaa saamayn wayn ku leh doorashada ka dhacaysa Hindiya.
Doorashadii 2014-kii waxaa ka qayb galay 464 xisbi, Hindiya ayaana kamid ah dalalka uu dhaqaalahoodu aadka usoo korayo, hase ahaatee dalkaas ayaa waxaa ka jirta shaqo la’aan baahsan.
Beeraleeyda dalkaas ayaa la daalaa dhacaya daymo badan oo sii kordhaya. Raysul wasaare Modi ayaa doorashadii 2014-kii ku galay hal ku dhig ahaa ” Maalmo wanaagsan ayaa nagusoo fool leh”, hase ahaatee dadka Hindiya ayaa ku go’aansan doona doorashadan in maalmahaas wanaagsan ay soo mareen xilligii uu talada hayey.
Dhanka kale Hindiya ayaa markii ugu horraysay duqaymo dhanka cirka ah ku qaadday dhul ka baxsan khadka cagaaran ee kala qaybiya gobolka lagu muransan yahay ee Kashmir tan iyo dagaalkii Hindiya iyo Pakistan ee 1971-kii.
Labada dhinac ayaa mid walba waxa uu sheeganayaa gobolka ay Muslimiintu u badan yihiin ee Kashmir balse mid kasta waxa uu ka xukumaa hal dhinac oo kaliya.
Raysul Wasaaraha Pakistan Imran Khan ayaa BBC-da u sheegay in nabad ka dhalata gobolka Kashmir ee ay Hindiya ku muransan yihiin ay tahay tallaabo wayn oo horay loo qaaday, guud ahaan gobolkana ay dani ugu jirto.
Hadalkan ayaana kusoo beegmaya ayadoo Hindiya ay u diyaar garoobayso doorashooyinka guud ee dalkaas ka dhacaysa.
Previous articleWakaaladda African Daily Voice oo ka faaloota Siyaasada Afrika oo Iftiimisay in raysal Wasaare Appy u De Dejinayo wadahadalka Somaliland iyo Somlaiya
Next articleTuugo Wayn oo Casriyaysan Cagagaf Lagu Dhacay malaayiin lacaga bangi ku yaala britain